Farmaajo oo cadaadis kala kulmayo arinta muddo kororsiga | Keydmedia
Farmaajo oo cadaadis kala kulmayo arinta muddo kororsiga
Madaxweynaha oo garab ka helayo Baarlamaanka ayaa xusul duub ugu jiro muddo kororsi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cadaadis xooggan kala kulmayo arinta muddo kororsiga ah ee laga cabsi qabo in uu dalka geliyo, taasoo horseesid karto dib u dhac iyo jahwareer siyaasadeed.
Madaxweynaha ayaa fariimo kala duwan ka helayo dhinacyada taageero dowladda Soomaaliya oo ay ugu horreeyso Beesha Caalamka, kuwaas oo ku aadan ka digtoonaashaha muddo kororsi iyo doorasho waqtigeeda ku dhacdo, islamarkaana wada ogol laga yahay.
Mareykanka ayaa ka mid ah dowladaha Madaxweynaha ugu cadaadinayo in uu ka fogaado muddo kororsi, waxaana qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho lagu sheegay in natiijada shirka Dhuusamareeb laga filayo go'aaminta nooca doorasho ee dalka.
Safaarada Mareykanka ee Soomaaliya qoraalka kasoo baxay ayaa sidoo kale lagu adkeeyay in muhiim tahay in doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda, loona baahan yahay doorashada dhaceysa in ay noqoto mid raali laga wada yahay.
“Nooca doorasho ee raalli la isaga yahay wuxuu u baahan yahay DFS, Maamul Goboleedyada, Baarlamaanka iyo daneeyayaasha siyaasadda,Waa in doorashada waqtigeeda ku dhacdaa, iyadoo aanu jiri doonin wax muddo kororsi” ayaa lagu yiro qoraalka kasoo baxay Safaarada Mareykanka ee Soomaaliya.
Arintaan ayaa ku soo aadeyso xilli madaxweynaha oo garab ka helayo guddoonka Gollaha Shacabka ee baarkamaanka Soomaaliya ay u durbaan tumanayaan muddo kororsi.